Izibonelelo zokukhwela ibhayisekile-iingcebiso kumadoda aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Izibonelelo zokuhamba ngebhayisikile
Siyazi ukuba ukudlala imidlalo inika ingxelo eyonelisayo kakhulu kwimpilo yethu, engqondweni nasemzimbeni. Yeyona nto incedisayo yokugcina umzimba uphilile, kuba uyayithuthuzela, unciphisa uxinzelelo kwaye unceda ukwandisa ukuzithemba. Ukukhwela ibhayisekile luhlobo lomdlalo oluxhamla kukwenza okufanayo.
Kwaye luluhlu olukhulu lwezibonelelo zokukhwela ibhayisekile. Ukuba mhlawumbi kusezandleni zabo ukukunceda ukunceda impilo yakho, uya kuyibona loo nto zininzi iimpawu eziluncedo ezijikeleze lo mdlalo. Ibhayisekile inokuba sisixhobo esilungileyo ukuba sisetyenziswe njengezothutho, njengolonwabo okanye njengenxalenye yobomi bakho, kuyo nayiphi na imeko, sichaza zonke izibonelelo zayo.
1 Izibonelelo zokuhamba ngebhayisikile
1.1 Wunyamekele umzimba wakho
1.2 Khathalela ingqondo yakho
1.3 Nyusa ukuzithemba kwethu
1.4 Khathalela okusingqongileyo
Ngumdlalo onokuthi Ukuziqhelanisa nakweyiphi na iminyaka kwaye umsebenzi wayo ungatshisa ukuya kwi-500 yeekhalori ngeyure. Yintliziyo yemithambo ukuze incede ekuphuculeni ukuhamba kwegazi lakho kwaye iluncedo kakhulu entliziyweni. Njengoko izinga lokuphefumla lihlala lihleli, kuyanceda ukwandisa amandla emiphunga. Enye inzuzo emzimbeni wethu kukuba Unceda ukunciphisa i-cholesterol embi kunye nokulahlekelwa ngamafutha. Kule khonkco unokufumana zonke izibonelelo zokuziqhelanisa nemidlalo.
Yomeleza izihlunu zomlenze, njengee-quads kunye nemisipha, kunye nendawo ye-lumbar, ngenxa yokuma kancinci. Kuyacetyiswa kakhulu kwiingxaki ezininzi zangasemva kunye nezidibeneyo, kuba ukuziqhelanisa kwayo akubangeli mpembelelo zintle.
Enye indawo eya komeleza ngamadolo kwaye iya kunceda ukukhulisa izihlunu ezibangqongileyo. Ukubambisa zonke ezi zihlunu kuya kunceda ukwenza ukubambelela okuchanekileyo kunye nokuqina emadolweni, ke abantu abajamelana neengxaki kule ndawo baya kufumana isiqabu esikhulu xa beziqhelisa ukunyathela.
Iyanciphisa isisu kwaye ilwa ne-cellulite. Siza kufumana isisu esisicaba kakhulu kuba uya kusebenza kwezi zihlunu ngendlela yesibini, ngale ndlela umzimba wakho uya kuhlala ustylized ngakumbi.
Ukuphucula amandla akho e-aerobic. Ukugcina inqanaba lokuhamba rhoqo kwaye ngaphandle kokuswela ioksijini kuya kwenza umzimba wakho ukuba uzive ngcono. Okukhona uzilolonga kwezemidlalo, kokukhona uya kubuphucula obu buchule.
Inceda amajoni ethu omzimba kwaye kubaluleke kakhulu ukunciphisa izifo ezicaphukisayo. Ziqhelanise nawo nawuphi na umdlalo komeleza ukhuseleko lwethu, okoko umthambo wentliziyo wonyusa ukhuseleko lwee-endorphins kwaye oko kuyanceda ukuba nemvakalelo eyonwabisayo ngakumbi.
Ngoko ke, Ukoyikisa izifo, Umzimba wethu uvelisa ii-phagocytes ezinoxanduva lokusikhusela kwiintsholongwane ezosulelayo eziyingozi emzimbeni wethu. Kubalulekile uhlale usempilweni ngokwenza imithambo, kungenjalo sisengozini yokuhlaselwa ziintsholongwane.
Olunye uncedo oluye lwafundwa kukuba ukuhamba ngebhayisikile kunciphisa amathuba okuba nomhlaza nesifo seswekile, izifo ezibini ezinokubulala. Iiphagocyte, njengoko kuchaziwe, zinoxanduva lokususa ezi ntlobo zeeseli eziyingozi.
Khathalela ingqondo yakho
Ziqhelanise nemidlalo ngebhayisikile yakho kukususa kuxinzelelo. Umthambo ioksijini emzimbeni ngenxa yoko ingqondo, kwaye oko kuluncedo kakhulu ukuvimba imo emibi. Kuyanceda ukuba ne- uvakalelo olukhulu ngakumbi kwaye inokuphelisa iingxaki ezininzi zengqondo.
Unqamle ngaphandle kwihlabathi langaphandle. Ukuba ujonga iqhinga lokubaleka kwinto ekuphazamisayo, le yeyona ndlela ilungileyo. Ukukhwela ibhayisekile ngumdlalo lowo ayifuni mathuba oxinzelelo, ke ifuna kuphela ukunyuka, ukunyathela kunye nokuvumela ingqondo yakho ukuba inqamle kuyo yonke into. Unokumamela umculo wakho owuthandayo kwaye uyonwabele indawo entle.
Kukunceda ukuba ucinge ngokukuko. Uphononongo lwakutsha nje olwenziwe ngo-2015 yiYunivesithi luyakungqina oku. Ukuxinana kwemicimbi emhlophe kwingqondo kuyanda, ke uqhagamshelo lwakho lobuchopho lungcono ngokulungelelanisa umzimba nengqondo yakho.
Inceda ukulala ngcono. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukwenza olu hlobo lomthambo kunceda umgangatho wakho wokulala njengoko uphucula. Uya kuziva uphumle ngakumbi kwaye iyakuvumela ungene ebhedini ukhululekile ngakumbi kwaye ufuna ukulala.
Nyusa ukuzithemba kwethu
Dlala imidlalo kwaye uzive ukhuthele iya kunceda ukonwaba ngakumbi nomzimba wethu. Ngokwasemzimbeni uyakuqaphela ukuphucuka, amanqatha omzimba wakho aya kuncipha kwaye oko kuyakukhuthaza. Musa ukulibala ukuba oku kunye ne-hormone yolonwabo iya kunceda ukuvuleka ngakumbi kubudlelwane bethu boluntu, iya kukukhuthaza ukuba ufune amava amaninzi ngebhayisikile kwaye uphume ngakumbi kunye nabanye abahlobo.
Ngokuqinisekileyo yindlela efanelekileyo yokuhamba. Senza umthambo kwaye singaya apho sifuna khona ngaphandle kokungcolisa indalo. Le yenye yeendlela zothutho ezingadingi mafutha, yiyo loo nto ithathwa njengenye yezendalo, kwaye ingakhuphi nengxolo. Kwelinye icala, sikwazi ukugcina imali kwaye oko kuyakubonisa epokothweni yethu, kwaye akufuneki silibale ukuba uya apho uya khona, Kulula ukupaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izibonelelo zokuhamba ngebhayisikile
Ungasusa njani isangqa esimnyama emadodeni
Uyenza njani imenyu esempilweni yeveki yonke